Shiinaha BCAA 2: 1: 1 Soo-saare iyo Badeecad | Haitiyaan
Alaabta: BCAA 2: 1: 1
CAS Maya .: 69430-36-0
Heerka: Guriga gudihiisa
Shaqada iyo dalabka: Cunnooyinka shaqeynaya Kordhinta nafaqada leh.
1. Kor u qaadida koritaanka murqaha oo yaree murqaha luminta
2. Kor u sii deynta insulinta iyo sii deynta hormoonka koritaanka.
xirxirasho:25kg / bac(durbaan，xirmo kale sida amarrada
Wadarta tirada saxanka
Khamiir iyo wasakh
BCAAs waxay ka kooban yihiin saddex amino acids muhiim ah:
Astaamahaan amino waa la isku wada keenaa maxaa yeelay waa saddexda amino ee kaliya ee leh silsilad isku xirta dhinac.
Saddexda BCAAs waa leucine, isoleucine iyo valine. Dhammaantood waxay leeyihiin qaab dhismeed meco kiciye ah waxaana loo tixgeliyaa inay muhiim u yihiin jirka aadanaha.
Sidee Aids-ka Branched-Chain u shaqeeyaa?
BCAAs waxay ka kooban yihiin qayb weyn oo ka mid ah barkadda amino acid ee jirka.
Wadajir, waxay u taagan yihiin qiyaastii 35-40% dhammaan amino acids-ka lagama maarmaanka ah ee jirkaaga ku jira iyo 14-18% kuwa laga helo muruqyadaada.
Ka soo horjeedka inta badan astaamaha amino, BCAAs inta badan waxay ku kala jabaan muruqa, halkii ay ka noqon lahaayeen beerka. Sababtaas awgeed, waxaa loo maleynayaa inay door ka ciyaaraan wax soo saarka tamarta inta lagu jiro jimicsiga.
BCAAs waxay door muhiim ah ka ciyaaraan jirkaaga.
Marka hore, jidhkaaga ayaa u adeegsan kara iyaga oo ah dhismeyaal dhismo oo loogu talagalay borotiinka iyo murqaha.
Waxay sidoo kale laga yaabaa inay ku lug yeeshaan nidaaminta heerarka sonkorta dhiiggaaga iyadoo la ilaalinayo bakhaarka sonkorta beerka iyo muruqyada iyo kicinta unugyadaada si ay uga qaataan sonkorta dhiiggaaga.
Waxaa intaa dheer, BCAAs waxay kaa caawin kartaa yareynta daalka aad dareento inta lagu jiro jimicsiga adigoo yareynaya wax soo saarka serotonin ee maskaxdaada.
Saddexda ka baxsan, leucine waxaa loo maleynayaa inay saameynta ugu weyn ku leedahay awooda jirkaaga si loo dhiso borotiinada murqaha.
Dhanka kale, isoleucine iyo valine waxay umuuqdaan kuwa wax ku ool ah soo saarida tamarta iyo nidaaminta heerarka sonkorta dhiiggaaga.
Jirkaagu wuxuu isticmaali karaa BCAA si uu u dhiso borotiinka muruqyada una soo saaro tamar. Waxay sidoo kale saameyn ku yeelan karaan maskaxdaada oo yareyneysa daalka.
BCAAs way yareyn karaan daalka inta lagu jiro jimicsiga
Isticmaalka BCAAs waxay kaa caawin kartaa yareynta daalka jirka iyo maskaxda.
Daraasadaha ku saabsan kaqeybgalayaasha aadanaha ayaa ka warbixinaya illaa 15% daal ka yar kuwa la siiyay BCAAs inta lagu jiro jimicsiga, marka la barbar dhigo kuwa la siiyay placebo.
Intaa waxaa sii dheer, BCAAs ayaa laga yaabaa inay waxtar badan u yeeshaan yareynta daalka jimicsiga ee aan la tababarin marka loo eego shaqsiyaadka tababbaran.
Dadka qaarkiis, BCAAs waxay kaa caawin karaan yareynta daalka jimicsiga. Haddii tani ay hagaajinayso waxqabadka jimicsiga wali waa dood.
Kaabisyada BCAA waxay yareeyaan murqaha murqaha
BCAAs waxay sidoo kale kaa caawin kartaa muruqyadaada inay dareemaan xanuun yar jimicsiga ka dib.
Hal dariiq oo ay sidaas ku sameyn karaan waa iyada oo hoos loo dhigo heerarka dhiigga ee enzymes creatine kinase iyo lactate dehydrogenase, oo ku lug leh dhaawaca murqaha. Tani waxay hagaajin kartaa soo kabashada waxayna kaa siinaysaa xoogaa difaac ah dhaawaca muruqa.
Kaqeybgalayaasha lasiiyay dheefaha BCAA waxay qiimeeyeen heerarkooda murqaha muruqyada sida ugu badan 33% ka hooseeya kuwa lagu siiyay placebo.
Xaaladaha qaarkood, kuwa la siiyay BCAAs sidoo kale waxay qabteen illaa 20% ka fiican markay ku celiyaan isla tijaabooyinka xoogga-tababarka 24 - 48 saacadood kadib.
Si kastaba ha noqotee, saameyntu way kala duwanaan kartaa iyadoo ku saleysan jinsigaaga ama wadarta guud ee borotiinka ee cuntadaada.
BCAA-yada la qaato ka hor ama ka dib tababarka xoogga ayaa yareyn kara xanuunka murqaha ka dib tababarkaaga. Si kastaba ha noqotee, saameyntu way ku kala duwanaan kartaa hal qof ilaa qof kale.
BCAAs Waxay Kordhin karaan Murqaha Maska
Dad badan oo iibsada kaabisyada BCAA ayaa sidaa sameeya si loo kordhiyo murqaha muruqooda.
Bcaa 2 1 1 Micnaha
Bcaa 2 1 1 Budada
Bcaa Muhiimka ah 2 1 1
Bcaa Muhiimka ah 2 1 1 Powder